တတိယအကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမြို့၌ ကျင်းပသည့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့၏ အလုပ်သမားရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးအဆင့်ညီလာခံသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ တက်ရောက် ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမြို့၌ ကျင်းပသည့် တတိယ အကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့၏ အလုပ်သမား ရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဆင့် ညီလာခံသို့ တက်ရောက်သည်။
ညီလာခံကို “ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများတွင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးတည်၍ လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပြီး ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အလုပ်သမားဝန်ကြီးများ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင့်နိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ် Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen က အမှာစကားပြောကြားသည်။
ညီလာခံသဘာပတိအဖြစ် ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင့်နိုင်ငံ၊အလုပ်သမားနှင့်သက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. ITH Samhengက ဆောင်ရွက်ပြီး အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် လာအို ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အလုပ်သမားဝန်ကြီးများနှင့်အတူ အမှာ စကားပြောကြားခဲ့သည်။
ညီလာခံတွင် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဒေသတွင်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲပြောင်းရယူနိုင်သော အလုပ်သမားဝန်ကြီးအဆင့် ကြေညာစာတမ်းကိုဦးတည်ဆောင်ရွက်မည့် ဆီရမ်ရိလမ်းပြမြေပုံနှင့် “ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အကာအကွယ်ပေးရေးကို ဦးတည်၍ လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း” ဆိုင်ရာ တတိယအကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့၏ အလုပ်သမားရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလုပ်သမားဝန်ကြီးအဆင့် ညီလာခံ၏ ရလဒ်များ အပေါ် ပူးတွဲကြေညာချက် တို့အား ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အလုပ်သမားဝန်ကြီးများက အတည်ပြုချမှတ်ခဲ့သည်။
တတိယအကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့၏ အလုပ်သမားရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဆင့် ညီလာခံမတိုင်မီ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် (၅) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် အလုပ်သမားရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအဆင့်မြင့် အလုပ်သမား အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့ပြီး အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးက ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အကျိုးခံ စားခွင့်လွှဲပြောင်းရယူနိုင်သည့် လူမှုဖူလုံရေးစနစ်သို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံအဆင့်တင်ပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့၏ အလုပ်သမားရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးအဆင့်ညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂ ရက်နေ့ထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့၏ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် နှင့်အလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြှင့်တင်ခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ကျင်းပခဲ့ပြီး တိုက်တွန်းချက် ၉ ခု ပါဝင်သည့်လုံခြုံစိတ်ချစွာ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာလုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပူးတွဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန် နိုင်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည်ညီလာခံတက်ရောက်စဉ်ကာလအတွင်းကမ္ဘောဒီးယားဘုရင့်နိုင်ငံ၊ အလုပ်သမားနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. ITH Samheng နှင့်တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုင်ငံအလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များကို နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။